लद्दाख जानका लागि किन रोयल इन्फिल्ड नै रोज्छन् राइडरहरु ? | Automotive News Nepal
लद्दाख जानका लागि किन रोयल इन्फिल्ड नै रोज्छन् राइडरहरु ? २१ कार्तिक, २०७६
बाइकरहरुका लागि भारतको मनोरम स्थान लद्दाख एक सपना हो । उनीहरु लामो दुरीको यात्रा पार गर्दै लद्दाख सम्म बाइकमै जान रुचाउछन् ।
तर बाइकमा पनि अन्य बाइक भन्दा धेरैले रोयल इन्फिल्डकै बाइक रुचाएको पाइन्छ । केही समय पहिले नेपाली राइडरहरु पनि त्यहाँ पुगेका थिए । नासा बुलेट क्लबका राइडरहरु रोयल इन्फिल्ड बाइकमै त्यहाँ पुगे । त्यसैगरी केही महिना पहिले राइडर अन्दिप आचार्य र उनका साथीहरु पनि रोयल इन्फिल्डमै पुगेका थिए ।
रोयल इन्फिल्डका अन्य बाइकका अलावा यसका लागि रोयल इन्फिल्ड बुलेट धेरै प्रयोगमा आएको पाइन्छ । यद्यपि हाल अन्य मोडलका बाइक पनि प्रयोग हुन थालेका छन् । किन बाइकरहरुको लद्दाख ट्रिपका लागि रोयल इन्फिल्ड अर्थात बुलेट नै रोजाई हुन्छ ? यसमा भने केही प्राविधिक कारण छन् ।
रोयल इन्फिल्ड अर्थात बुलेट एक भारी बाइक हो । बुलेट बाइक सडकसँग टाँसिएर गुडेको हुन्छ । हाइवे होस या पहाडी इलाका हरेक स्थानमा यस्तो बाइकको आवश्यकता पर्छ, जुन चिप्लिदैन । बुलेट बाइकको इन्जिन निकै भारी हुन्छ । पहाडी क्षेत्रमा जहाँ चिसो हुन्छ त्यस्तो स्थानमा बुलेट बाइक निकै फाइदाजनक हुन्छ । बुलेट बाइकमा भारी सामान बोक्ने क्षमता पनि हुन्छ । त्यसैले नै राइडरहरुले बाइकको पछाडि आफ्ना सामान पनि राखेका हुन्छन् ।
इन्जिन र पावरको कुरा गर्ने हो भने रोयल एनफिल्ड बुलेट ३५० मा ३४६ सीसी सिंगल सिलिन्डर इन्जिन जडान गरिएको हुन्छ जसले ५२५० आरपीएममा २०.१ बीएचपीको पावर र ४ हजार आरपीएममा २८ एनएम टर्क जनेरेट गर्छ । बुलेट बाइकमा ड्युअल च्यानल एबीएसको साथमा फ्रन्टमा डिस्क र रियरमा ड्रम ब्रेक रहेको हुन्छ । बुलेट बाइकको फ्रन्टमा टेलिस्कोपिक सस्पेन्शन र रियरमा ट्वीन शक एब्जर्वर सस्पेन्शन रहेको हुन्छ ।
काठमाडौं – हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा अवस्थित नेपाल र चीनबीचको कोरला नाका सञ्च...
कस्तो छ योगी आदित्यनाथको नयाँ कार ?
एजेन्सी – उत्तर प्रदेशका नयाँ मूख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको चर्चा आजकाल धेरै छ ।...
अचम्मको मूल्य र फिचर सहित आयो अर्को फ्युचरिस्टिक लुकको इलेक्ट्रिक बाइक
अमेरिकी मोटरसाइकल क्लेभेल्यान्ड साइकलवेर्कले एक नयाँ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल पेश गर...